शब्दकोश: 'अफिसे दसैँ'
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, September 26, 2009
Asha September 26, 2009
विजयादशमीको पावन अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना...
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा September 26, 2009
विजया दशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु धाइबा र क्याफे मंगलममा पाइला टेक्नु हुने सबै मित्र हरुलाई !
सूर्य/सिकारु September 27, 2009
देशमा हुनुले पनि यति पीडा ओकल्नु भएको छ भने हामी प्रवासमा बस्नेले त झन कति गाठो परेको होला यो मन धाइबा जी समय र परिस्थिति संग लहराउनु नै जीवनको रीत रहेछ ।
अफीसमै भएपनि बडा दसैँको हार्दिक मंगलमय शुभकामना यो भरिलो क्याफे र तपाइको जीवनप्रति ।
दीपक जडित September 28, 2009
वास्तवमा आफुले कसरी लिइन्छ त्यसरी नै आउने र जाने गर्छ दशैं (होस् वा अर्थोक केहि) । लगातार ७ वटा दशैं भएछ मैले घरमा नमनाएको - र पनि हरेक दशैंमा मलाई त रमाईलो लाग्छ । आफुलाई जहाँ छु र जस्तो छु त्यस्तैमा स्विकार्न सकेकैले हो कि त ? मैले दशैंमा अचाक्ली घर मिस नगरेको ?
Basanta September 29, 2009
यस्तै हो धाइबाजी, परिवार र समाजको महत्ताबोध हुने क्षणहरु यस्तै हुन्! दुई पटकको विदेश बसाई गरेर कूल १२ दशैं विदेशमा बितिसके मेरा। अबको दशैं भने जसरि हुन्छ परिवारमै मनाउने तिब्र तृष्णा बोकेर बसेको छु मनमा।